10 Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 10 Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis
shirkadda daynta warshadaha
Waa maxay shirkad deyn warshadeed? Beddelka charter-ka dheer ee shirkadaha doonaya inay galaan bangiyada iyo adeegyada maaliyadeed ee la xiriira waa bangiga warshadaha ama shirkadda deynta warshadaha.
Maqaalkan markaan horumar sameyno, waxaan ku tusayaa qaar ka mid ah shirkadaha amaahda warshadaha ee ugu fiican ee daboolaya caymiskaaga.
I soo raac. Dhanka kale halkan waa miiska dulucda hoose ee dulmarka waxa laga filan karo maqaalkan.
Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah shirkadaha amaahda Warshadaha ugu fiican ee aad ka heli karto. Waqti qaado si aad u akhrido oo aad u hesho midka kugu habboon.
#1. Geedka Amaahda
Wuxuu isbarbar dhigayaa qiimayaasha iyo xigashooyinka amaah -bixiyeyaasha badan ee noocyada kala duwan ee amaahda. Adeegyada bilaashka ah. Isticmaalka goobta ma saameyneyso dhibcaha dhibcaha. Waxay bixisaa liiska ikhtiyaarrada amaahda oo ku habboon xaaladda isticmaalaha.
#2. Ukunta ugu fiican
Waxay bixisaa amaah shakhsiyeed ilaa $ 35,000. Dhererka muddada deynta ayaa u dhexeysa saddex illaa shan sano. Wuxuu u baahan yahay dhibco buundo oo ah ugu yaraan 640. APRs waxay ka bilaabantaa ugu hooseeya ilaa 5.99%. Isugeynta deynta ugu yar waa $ 5,000.
Waxay bixisaa amaahda shaqsiyeed $ 600 ilaa $ 20,000. Waxay bixisaa amaahda ganacsiga yaryar. Wuxuu u baahan yahay dhibco dhibco oo ah 760 qiimayaasha ugu fiican. Waxaa ku jira toddobo maalmood “dammaanad-qaad la'aan walwal” si loo soo celiyo qaddar kasta. Ma jiro ganaax lacag bixin ah.
Waxay bixisaa amaahyo shaqsiyeed, amaahyo aan la hubin, isku -darka deynta, amaahda ganacsiga yaryar iyo maalgelinta ganacsiga bilowga ah. Adeeg bilaash ah. Ma jiro dhibco deyn oo u qalma si loo helo amaah. Waxaa laga heli karaa wadanka oo dhan.
#5. Amaahda Avio
Deyn-bixiye intarneedka oo bixiya amaah shakhsiyeed oo go'an, amaahda qaybinta iyo khadadka amaahda. Go'aanka amaahda degdegga ah marka la dhammaystiro codsiga. Wuxuu u baahan yahay dakhli bille ah ugu yaraan $ 1,000. Wuxuu ka shaqeeyaa 10 gobol.
#6. Westlake Maaliyadeed
Westlake Financial waxaa la aasaasay 1988 waxayna qayb ka tahay Kooxda Hankey Group ee Shirkadaha. Waxay xaruntiisu tahay Los Angeles. Westlake waxay bixisaa maalgelin otomaatig ah iyada oo loo marayo iibinta baabuurta ee Mareykanka oo dhan.
la xiriira: Amaahda Ardayda Bangiga America: Dib -u -maalgelinta iyo Beddelka
#7. Xoriyadda Plus
Waxay bixisaa amaahda shaqsiyeed $ 7,500 ilaa $ 40,000. Go'aannada deynta ee isla maalinta ah ayaa la heli karaa. Kaliya waxay bixisaa amaahda gobolada qaarkood. Muddooyinka dib -u -bixinta waxay u dhexeeyaan 24 illaa 60 bilood. APR -yadu waxay ka bilaabmaan 7.99% ilaa 29.99%.
8#. Maaliyadda Dell
Dell waxay bixisaa maalgelinta alaabada Dell. Macaamiisha xiisaha leh waxay codsan karaan maalgelinta onlaynka ah, qaar amaahda ama iibsashada ah ayaa laga yaabaa inay u qalmaan muddo dulsaar la'aan ah. Amaahiyayaashu waxay sidoo kale ku kasban karaan 10 boqolkiiba abaalmarinno.
Adeegyada lacagta waxaa ka mid ah kuwo kala duwan fursadaha maalgelinta ganacsiga oo ay ku jiraan daymaha ganacsiga, maalgelinta qalabka, kiraynta qalabka iyo raasamaalka shaqada. Waxay bixiyaan dulsaarka dulsaarka tartanka iyo 100 % adeegyada maalgelinta.
#10. Macaamiisha Santander USA
Santander waa bangi ku saleysan Isbaanish oo leh joogitaan caalami ah. Waxay u shaqeysaa sidii Santander Consumer USA Inc. ee Mareykanka oo xaruntiisu tahay Fort Worth, Texas. Qeybta Mareykanka waxay diiradda saareysaa amaahda baabuurta.
Gebogebadii, aan kuu sheego tan: marka aad deyn ka qaadato bangiga ama shirkad deyn, waxaa suurtogal ah in aad ka sii fekereyso qiimaha shayga aad ku iibsan doonto lacagta amaahda marka loo eego qiimaha deynta lafteeda . Meeshaas oo dadka intiisa badani ay ka maqan yihiin.
Haddii aadan tixgelin qiimaha amaahda, shaygaasi wuxuu ku dambayn karaa kharash aad uga badan inta aad filayso. Tan micnaheedu waa inaad hubiso inaad wada hadal la yeelatid amaahiyahaaga si loo hubiyo inaad hesho heshiiska ugu fiican ee deynta.
Hubi inaad si dhab ah u fahanto dhammaan khidmadaha la xiriira iyo sida dulsaarku u urursan doono. tani run ahaantii wax badan bay kuu badbaadin doontaa.
Dugsiga qalin-jabinta wuxuu noqon karaa hab fiican oo loogu diyaargaroobo xirfad guulaysata, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa…